4C, 4A, 4B & Zita 3 Curls & Patterns For Black Black Hair?
Kusiyanisa muTsika 4 uye 3A, 3B kana 3C Textures?
Iyo huru mbiri mvere dzomukati nokuti vakadzi vane ruvara vane zvakawanda zvakafanana, kusiyana, uye zvinowanzoitika. Semuenzaniso, avo vane chirongwa che3, chinoratidzika sechinyoro kana chakanyorova. Asi pakarepo paanotanga kuoma iyo inokurumidza kudzokera kumamiriro ayo akaoma.
Vaya vane 4a 4b chaiwo uye 4c zvishongo zvebvudzi zvine zvimwe zvakasiyana-siyana uye zvakanakisa zvidhori! Kunyange zvakadaro, urongwa urwu ndewumwe hwezvinonyanya kuoma uye hunonyangadza kutarisira nekuda kwemashiripiti ayo akaoma.
Nyora 4 vhudzi dzemazuva ano dzichagara dzakanyanyisa kana dzisina kunaya uye dzichanyanya kupera kana mapepi kana yakaoma. Ndinoda mhando dzose dzakasiyana-siyana dzebvudzi rechisikwa, uye ndinofara zvikuru kuti vamwe vakadzi vari kutanga kugamuchira vhudzi ravo rezvemusoro.
Ndiri kukugoverana newe zvimwe zvekusiyanisa kwakakosha pakati pemakumbo akasiyana-siyana uye mamwe mazano makuru ekutarisira vhudzi rako.
Ringlets kana mapepi anongomira zvakasimba chaizvo pamakona mashizha emakiromita anenge mashoma mamita maviri. Chinangwa changu chechiitiko ichi ndechekutikubatsire kudzidza zvose zvaunogona kuti uwane nzira yakanakisisa yekukura nekuchengetedza nguva yakareba, yakareba, uye hutano hwakanaka hwebvudzi pasinei nokuti iwe uri chimiro chei.
1 Chii Chinonzi 3 Musoro?
5 CHII CHINHU CHINHU CHINHU CHA4 HAIR?
9 Nzira Yokuchengetedza Sei?
9.1 Bvudzi revanhu
9.1.1 Mamwe Miti:
Chii Chinonzi 3 Musoro?
Vaya vane ruvara rwe 3 vhudzi vanowanzova nemuviri wakawanda, bounce uye vanovhenekera vhudzi ravo. Mhuno yacho inowanzokwirira mumhepo. Luster iri kureva nzira iyo chiedza chinoratidza kunze kwebvudzi rebvudzi. Bvudzi rinowanzova nyore kutarisa, kushandisa, uye kururamisa. Mvere dzembudzi shoma dzinodiwa define these curls. Ndiri kuzoputsa kusiyana pakati pe3A, 3B & 3C.
Avo vane 3a mvere Iva netsika yakasvibiswa yakadzika inogoneka. Chinhu chipi zvacho chakasununguka kupfuura 3A chichawira mukati memapoka maviri. Vaya vane mvere dzemhando 2a-2c vachava nemafungu uye kwete kuzora. 3a mhando dzevhu dzemawere dzinowanzove dzakapenya kune iyo, zvinoreva kuti ine chido chakakwirira.
3a bvudzi rakagadzikana hazviwanzoiti zvakanaka zvakakonzerwa nemapiritsi emafuta, mafuta, kubva muzvigadziri kana zviremara zvemishonga yakakosha zvakanyanya sezvo izvi zvichaenda pasi pasi pebvudzi ndokuita kuti zviratike sechinhu chisina kumira panzvimbo chekucheka. Tsvudzi iyi inobatsira zvikuru nemvura-based lightweight leave-in conditioners.
Izvi zvipfeko zvine bhari yakazara yakakomberedzwa. Sezvo vhudzi rinosvika kwenguva yakareba kuputika kuti ridonhedze mu "S" chimiro nekuda kwehukuru hwebvudzi, zvichiita kuti iite seyakasviba kupfuura kupisa. Nzira yakanakisa yekudzivisa kushandiswa kwechigadzirwa chisina kunaka pavhudzi rako ndechekutarisa zvinoshandiswa. Kana yekutanga 1-3 zvinokonzerwa nemaminerari emafuta kana petroleum, zvino kupfuura zvingangoita, chigadzirwa chacho chichave chakakwira kana kuti mafuta kune vhudzi rako redzi.
Kubvira pane zvakaitika kwandiri kuva nyundo dzepanyama, ndinotarisa kuti iyo tsika yakakoshesa inonyanya kune avo vanonzi Puerto Rico.
Kuti ujekese aya mavharesi kushambidza nyore uye enda nechiedza chekusimuka muzvikamu zvakanakisisa. Zvadaro bvumira bvudzi racho kuti rive rakaoma.
chithunzi chikoro IG: taty_froever
Avo vane 3b bvudzi vane zvinhu zvakafanana kune 3a vhudzi. Musoro webvudzi unowo unowanzova wakareba mukuchira uye ane miviri miviri uye unowedzera kune vhudzi. Iyo yeplink ye 3b bvudzi yakanyanya kuderera uye duku kudarika ye3a. Iyo mbiya yechinyoro inofanana neyeye chikwata chakakura cheCrayola.
3b bvudzi ndiko kwaunogona kutanga kuona frizz nekuzvikudza mukati mechati chebvudzi. Avo vane 3b zvigadzirwa zvepanyama vangave vachida kushandisa zororo-muzvigadziri uye zvimwe zvisinganzwisisiki zvigetsi zvekudzivirira kuchengetedza frizz. Kunyange zvakadaro, ichiri kurondeka uye hazvibviri kushandura tsvina yeHNUMXb.
Shamba uye unoenda unowanikwa uye nzira yakagadzirika yeavo vane 3b mifananidzo. Kana iyi iri bvudzi rako ipapo zvishoma iwe unoshandisa bvudzi, iyo inonyatsotsanangurwa kuti zvipfeko zvichave. Zvishandiso zvakakura zvinoshandiswa pamhando iyi yevhudzi zvakafanana neya 3A. Mishonga ine glycerine mairi inoshanda zvakanaka sezvo iine mafuta-based oil uye ichapa tsanangudzo yakakwirira pasina kuyera vhudzi pasi.
Kunyangwe chero munhu uye chero rudzi rwupi zvingave ne 3b bvudzi rakabhururuka, rinowanzoonekwa muvanhu vakavhengana kana vemadzinza. Vanhu avo vatsva kana veAfrica America vakavhenganiswa nehumwe hukama hunowanzotarisa kuva nevhudzi rakakoshesa kazhinji kacho kunowanzova nemhepo yakasununguka. Zvisinei, iwe haufaniri kuva webharacial kuti uwane 3B purogiramu yemapiritsi. Shamba uye enda ndezvakawandisa uye zvinozivikanwa neavo vane 3B bvudzi.
chithunzi chikwereti OG: @naturalhairobsessed_
3c mvere rine chimwe chinhu chakasiyana nei 3a ne3b vasina. 3b bvudzi rinotanga kukura panzvimbo yepasi. Zvinoreva kuti zvichazotanga kukura zvakananga kunze kwebvudzi rebvudzi, ipapo apo bvudzi rinotora nguva refu uye rinorema, rinotanga kuwira kugadzira chimiro chakakomberedza chinonzi curly fro.
Corbin Bleu muenzaniso wakaisvonaka wekugadzirwa uku. 3c inoda kusanganiswa pakati peaaver curl cream uye zvimwe zvisinganzwisisiki mvura-based products. Ichi ndicho chibereko chine rudo. Vazhinji vevatengi vangu vane 3c bvudzi vangashandisa chero chero chigadzirwa.
Icho chinyararire chinofadza pakati peios curly uye tight coily hair. Tsvudzi iyi inogona kuwana zvakakwana, uye mishonga yekuchengetedza bvudzi inodiwa kuti ibatsire kutsanangurira zvipfeko uye kuchengeta frizz zvishoma.
Vaya vane mvere ye 3c vanotanga kushambidza zvishoma uye vanoenda uye vanobatanidza kuwedzera mune zvavanoita. Nzira yakakurumbira yekujekesa 3c curls yakasvibiswa kunze sekugeza uye kuenda kunoda nguva yakawanda uye chigadzirwa.
A great curl defining tool for 3c hair is the brush Denman. Pane zvakawanda zvevamwe mapiritsi anotsanangura mabhesi pamusika kuti asarudze kubva ikozvino.
Vazhinji vakadzi vane mvere dzeC3c dzinofungidzirwa kuti dzine dzakanakisisa zvepasi rose kana zvichienderana nekuwanda uye kuwanda. Kuwanda kwezvinhu zvinoreva kuti mvere dzakaita sei uye kubwinya kunotaurira kuti hutete bvudzi rimwe nerimwe hwakaita sei uye nekugadzira musoro wakakwana wezvisikwa zvepachivara!
CHII CHINHU CHINHU CHINHU CHA4 HAIR?
Sawa, chandinoita 4 Natural divas! Kana iwe wakazvigadzira kune izvi, unogona kunge uchitsvaga zvinhu zvose zviri muTegumi 4 mvere. Zvakanaka, takufukidzira. Iyi Inotungamirira Mufambiro Pamutambo 4 Mutsvuku inobatanidza zvinhu zvose pamusoro pekuziva kana iwe une Chimiro 4 vhudzi yekuchengetedza bvudzi rako chekudzivirira michina. Ngatitangei mukati.
Nyora 4 mvere dzinozivikanwa se nappy or kinky, asi chaizvoizvo, ichi ndicho chinyorwa chebvudzi rakanyanyisa. Izvo zvipfeko zvakanyanyisa zvokuti vadzidzisi vevhudzi vanotaura mairi seanobaya. Koily vhudzi rechisikiro rinokura uye kunze. Ichatsvaga zvakawanda zvekutengesa uye kushandiswa kuti zviite kuti zvirembedze. Nyora 4 chaiwo bvudzi rakanaka uye rinopisa. Iine chidimbu chakadzika nechinguva chiduku kunze kwekuti bvudzi racho rinotsanangurwa mumutauro. Nyora 4 chaiyo bvudzi rinogona kubata rakagadzirwa uye rinoda unyoro. Dzidza zvakawanda pamusoro afro mavara uye maitiro.
4A mvere ndeimwe yemhando mitatu yerudzi rwe 4 spectrum. Rudzi rwebvudzi urwu runoita tights-curl inoratidzika semhepo inopenya kana duku. Iyi tsanangudzo inoratidza kuburikidza kana yakakwana inonaya mvura. Vakadzi vangu vanowira munharaunda iyi vangave vane kero imwechete yekeroti. Asi 4a ichava iyo yakawanda.
4a bvudzi rine zviduku zviduku kana mapepi. Uhu hweseri hungave hwepencil kana huri kunyatsoputika. Izvi zvinoshandiswa zvakanaka nekuputika kunze, kubhururuka kunze, Bantu mazano, uye mamwe akawanda maitiro.
Kunyange zvazvo kushambidza uye kuenda kunogona kuve nekugadzirwa uku, vazhinji vakadzi vanosarudza kusaita chimiro ichocho nekuda kwe shrinkage. Pamusana pemamiriro akakomba e-4a bvudzi rakanyanyisa shrinkage uye haritauri nguva yakareba yakanyatsonaka zvakanaka pasina kutambanudza, iyo chimiro. 4a bvudzi rinoita zvakanaka ne glycerin based products. Zvichienderana ne porosity yebvudzi rakagadzirwa, iwe unogona kudikanwa zvakanyanya kuporesa kuti uvhare mumunyoro.
photo chithunzi @tropicurlie ig
Kana uri nenguva yakaoma kuziva kuti kana bvudzi rako rakagadzirwa S rakagadzirwa kana rakasimba z-curl iwe unogona kunge uri 4B, inozivikanwawo sezviri mukati. Tsvudzi iyi inobata zvinosanganiswa ne tights-curls kana kusununguka z-curls.
4b bvudzi rinowanzoshandura kupfuura huni hwe 4C uye rinokwanisa kuwedzera zvishoma uye kuramba richireruka kwenguva refu kupfuura mutsvuku we4C. My divas ane 4b bvudzi rine vhudzi rakapetwa nekotoni kuonekwa kana isingatsanangurwa. Zvinotora zvishoma kuedza kuita kuti mapepa acho apfe.
Tsvudzi iyi ine musanganiswa wemakumbo nemaketeti Mazhinji e4b madzimai uye maumbirwo uye mafashoni vhudzi ravo chero zvakadaro. 4b inomira inowanzove yakanakisa uye iri nyore kuvhara uye inoda kugara uchiita unyoro.
Kuderedza kudengenyeka mafashoni inzira yakanaka yekukura nekuchengetedza urefu. MHEHE Coily Collection, pamwe chete neAfro Kinky Collection, inopa zvinyorwa uye zvinyorwa-ins zvinosanganisa zvinoshamisa neiyi yekodeti.
4C mvere inenge yakazara uye yakafanana ne4b, asi bvudzi iri rinowanzove rine tsanangudzo shomanana uye rinosangana nehuwandu hwakawanda hwe shrinkage. Zvindori zvakasimbiswa zvakanyanya. Vamwe vanhu vanoti 4c bvudzi rine azamu, asi izvo hazvina kururama. Tsvudzi haigadziri pfungwa dzakakosha uye kink kumashure pane iyo inongoputira pari payo. Asi ichiri chikafu! Semuenzaniso, mumwe munhu ane 4c bvudzi anogona kuva ne 12 inches of hair when stretched, but it may only appear as 3-4 in length in its nature and wash.
Vazhinji 4c naturals havadi kupfeka kushamba uye vanoenda. Nzira inonyanya kufarirwa nehutambo 4c bvudzi iri nekunze kwekunze uye kubhururuka kunze sezvo vachiratidza zvishoma zvishoma uye vanochengeta bvudzi rakatambanudzwa uye rinotaridzika. Izvo zvipfeko zvakasimba zvinotarisa kubva kune zvakanakisa zvakanakisa uye zvakanyorova kuve uye zvakaoma. 4C bvudzi rinowanzova nepamusoro-soro yezvivako, zvichiita kuti zvive nyore kunyanya unyoro asi nyore nyore kurasika. Mafuta-based products anoshanda zvakanaka kuti asimbise kuti unyoro mukati uye zvakare hukuru mukunyora kwemaitiro. Tarisa bhurodhi redu pane nzira yeLOC! MHE 4C nywele chikamu Ins vane chokwadi chekufadza sezvavakaita kuti vakwanise kutarisa zvakananga sekutsika kwako.
Nzira Yokuchengetedza Sei?
Unogona shandisawo - afro crochet hair saka iwe unogona kusungira bvudzi rako rechisiki sechidziviriro chekudzivirira kana kuchiisa mumusoro wepamusoro kana ponytail Yedu afro kinky curly hair iyo nzira yakanaka yekuwedzera yakareba uye kureba bvudzi rako reAfro kana buy kinky hair extensions.
kinky straight hair clip
Heano mamwe mazano ekugadzirisa kwaunoita Rudzi rwako 4 mvere kuti uchengetedze huri kunyorovesa, hutano, uye hukura.
Iwe unofanirwa kushandisa mushonga wezuva nezuva wekuvandudza maruva ako. Ichaitawo kuti zvive nyore kugadzirisa nekukurumidza kunamatira mangwanani. Shandisa chimwe chezvinhu zvakakurudzirwa zvemaitiro ekudenga kuti ugadzire chimiro chako chaunoda.
Izvi zvakagadzirwa zvakanaka pakubatsira kuchengetedza 4C kuchenesa pasina kuvaka. Izvi zvinogadzirisawo kugara 4C mvere dzisingakwanisi uye dzakanaka.
CURLS Blueberry Bliss Control Peta
Cantu Shea Butter Bvisa Mukugadzirisa Kugadzirisa Cream
Zvichienderana nekushanda kwako, unogona kuwana kuti Yenyu Yacho 4 misoro inoda kungoshamba masvondo ose e1-2.
Shandisa detangler pane vhudzi remvura isina unyoro usati wageza bvudzi rako kuti usunge mazhi ako kunze, pasina kumhanya. Iwe unogona kushamisika pane kunonoka kuvhara kunogona kuitirei bvudzi rako.
Shandisa kushamba-sara mushure mekuchenesa kunze kwekutora kwako. Tarisa pane chigadziko kuti ubvise kuvaka.
Shandisa shampoo yekuchenesa. Imwe yezvatinoda ndeye Shea Musungo Jamaican Castor Oil Shampoo. Iyi shampoo inosuka pasina kubvisa bvudzi.
Pedza nekwakadzika kubva-mu-conditioner. Regai izvi zvigare mumveredzi yenyu kwemaminitsi e15 pasi pekivha kana muchitsiga kuti zvive nani.
Chii chinoita kuti "Type 4 LOC Method" yakasiyana nedzimwe nzira inowanikwa LOC? Izvozvi zvakafanana. Kunyange zvakadaro, zvishandiso zvinoshandiswa kuType 4 mvere dzese zvinofanira kuva mafuta-based products.
Kuenda kwako-kunofanira kunge kunonyanya kufanana nemafuta-based-water-based, mafuta ako anofanira kunge ari mafuta epakisi kana kokonati mafuta, uye nokuda kwekugadzira kamuki uchishandisa imwe yemazano ari pamusoro apa.
Silk kana satin, madzimai! Chengetedza mazamu akanaka aya akafukidzwa usiku nemucheka kana bhotet. Kana uine nguva, iwe unogona kushandura bvudzi rako usati wanyarara kutambanudza mapepa ako ezuva rinotevera.
Natural Flat Twist Styles - Uyu ndiye mwarikadzi watinotarisa anotarisa. Zvakanaka nokuda kwezvinhu zvakashamisika, zviitiko zvakakosha kana bvudzi-risina maturo-zviite kwevhiki yebasa. Uyewo, iva nechokwadi chekushandisa yedu yakanakisisa yakarurama chechechet hair kuti awedzere mamwe marefu.
Crochet Braids - Izvi zvinokurumidza kuva chimiro chekudzivirira chinonyanyozivikanwa kuti chiwedzere vhudzi rako pasina glue kana wigs. With crochet braids, unogona kushandisa bvudzi rakafanana neyo coarse yaki crochet hair nokuda kwekunyorera. Crochet braids yakanyanya nyore, uye iwe unogona kutarisa hurukuro yakanaka pane iyo pano.
Kunyorera bvudzi rako kunowanzokuvadza !?
Nzira Yokuva Yakasvibiswa Sei?